खाली पेटमा सेतो चिया पिउनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् ! पेटमा बढाउँदछ ग्याष्ट्रिक म्यूकोसा – Khabaarpati
December 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on खाली पेटमा सेतो चिया पिउनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् ! पेटमा बढाउँदछ ग्याष्ट्रिक म्यूकोसा
– ग्यासको समस्या : चिया केमिकलबाट बनेको हुन्छ, चियामा हाल्ने मसलाहरु र चीन मिक्स हुदापेटमा ग्यास जमेर पेटसम्बन्धी अनेक रोग सिर्जना हुन्छ ।– शरीरलाई हानी : चिया पिउनाले शरीरमा प्रोटिन र अन्य पोषण तत्वको अवशोषण सहि तरिकाले हुदैन् । यहि कारणले शरीरलाई एकदमै हानी र रोग निम्त्याउँछ ।– वाकवाकी लाग्ने : कहिलेकाहि वाकवाकी भएमा खानालाई दोष दिने बानी धेरैको हुन्छ । तर खानाले नभएर चियाले वाकवाकी हुनसक्दछ । चियामा टेनिन पाइन्छ, यहि कारणले गर्दा वान्ता हुन्छ ।
१.खाली पेटमा चिया पिउँदा शरिरमा प्रोटिन र पौष्टिक पदार्थ सोस्ने क्षमता कम हुन्छ ।२. खाली पेटमा कालो चिया पिउँदा पेट फुल्छ ।३. चियाले खाली पेटमा ग्याष्ट्रिक म्यूकोसा बढाउँदछ जसले कम भोक लाग्छ ।४. चिया एसिडिक हुन्छ त्यसकारण यसलाई खाली पेटमा पिउँदा एसिडिटी बढ्दछ ।५. चियामा टोनिक हुन्छ । त्यसकारण खाली पेटमा चिया पिउँदा बान्ता आउला जस्तो भान हुन्छ ।
६.एक दिनमा ४/५ कप चिया पिउँदा पुरुषलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्भावना बढ्छ ।७. खाली पेटमा दुध हालेको चिया पिउँदा थकान महसुस हुन्छ र इरिटेसन बढ्छ ।८.धेरै कडा चिया पिउनेहरुमा अल्सर हुने खतरा बढि हुन्छ ।९.अदुवा हालेको चिया खाली पेटमा पिउँदा ग्याँसको समस्या हुनसक्छ ।१०.चियामा क्याफिन, एल–र्थासनन र थियोफाइलिन हुन्छ । यो खाली पेट पिउँदा अपचको सम्भावना हुन्छ ।
नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अमेरिकाकाे घोषणा
June 15, 2021 June 15, 2021 goodmam